‘ह्याप्पी बर्थडे’ प्रेमिका! :: आदित्य दाहाल :: Setopati
‘ह्याप्पी बर्थडे’ प्रेमिका!
सर्वप्रथम त तिमीलाई यस पृथ्वीमा जन्मदिने ती महान् दुई रत्न आमाबुवाप्रति साष्टाङ्ग प्रणाम। जन्म लिनु भनेको जुनी लिनु हो। मान्छेजस्तो सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा यो जुनी पाउनु निकै भाग्य, हर्ष साथै खुसीको क्षण हो।
तिमी जन्मेको दिन खुसी मापन गर्ने यन्त्र बनेको थियो भने सायद तिम्रो परिवारको खुसी त्यस यन्त्रले मापनै गर्न सक्दैनथ्यो होला। प्रकृतिलाई नै चुनौती दिन खोज्ने वैज्ञानिकहरू खुसी नाप्ने यन्त्रको आविष्कारमा किन चुके? किन सफल भएनन्? हुन खोजेनन्, हुन चाहेनन् वा आविष्कारको प्रकृयामा छन्? यसको उत्तर पनि समयअनुसार सुन्न, देख्न पाइएला नै।
कुनै पनि सम्बन्धमा, जन्मदिन तथा कुनै उत्सवहरू मनाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण अझ भनौँ विशेष विषय भित्र पर्दछ। त्यहीँमाथि आज तिम्रो जन्मदिन। सम्बन्धमा स-साना कुराले पनि धेरै महत्व र अर्थ राख्छ जब दुईले बिना सर्त एकअर्कालाई माया गर्छन्।
आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकालाई हेरचाह गर्ने, माया गर्ने, विश्वास गर्ने सम्बन्धको अनिवार्य सर्त नै हुन्। आज तिम्रो जन्मदिन, आजको दिनमा एउटा साधारण सन्देशले तिमीलाई विशेष महसुस गराउन सक्छ भने अभिप्रायले यो शुभकामनासहित तिम्रो लागि यी सन्देश कोर्दै छु।
प्रिय, उमेर एउटा संख्या मात्र हो। उमेर बढ्नु भनेको माया बढ्नु हो, बढ्दै जानु हो। कुनै अकल्पनीय दुर्घटना नघटेको खण्डमा मान्छे जन्मिएपछि, बालक, युवा हुँदै बुढेसकालसम्म पुगेर उसले संसारबाट बिदा लिन्छ। समयको चक्र नै यहीँ हो।
मलाई यस्तो लाग्छ, उमेर बढ्दै जानुले तिम्रो र मेरो सामीप्यता अझै गाढा बनाउनेछ। उमेरको ग्राफ बढ्दै गएपछि आधिकारिक रूपमा एकअर्काको बन्ने सपनाको अवधि घट्दै जानु पनि हो। हामीलाई झन् नजिक बनाउने ती दिनहरूको हाम्रो जीवनमा प्रवेश पाउनु हो।
तिम्रो जन्मदिनमा म यो कुरामा पनि निकै हर्षित छु। तिम्रो उमेर मात्रै बढेको होइन माया बढेको हो, हेरचाह बढेको हो, विश्वास बढेको हो। यहाँ मात्रै उमेर बूढो हुने हो, मेरो आँखा, हृदय र आत्मामा तिमी कहिल्यै बूढी हुने छैनौ।
परापूर्वकालदेखि हामीले सुन्दै आएको तर पुष्टि हुन नसकेको एउटा भनाइ छ- मानिसले ८४ लाख जुनी फेर्नु पर्छ, लिनु पर्छ। यसमा सत्यता छ, छैन थाहा छैन। तर, यदी सत्य रहेछ नै भने पनि हरेक जुनी लिँदा जुनी-जुनीका लागि तिमी र मबाट हामी भएरै त्यो समय पार गर्न पाउँ। यो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भगवानसँग एउटा भक्तले मागेको प्रसादी हो।
जिन्दगीको आरोह अवरोहहरूमा धेरैसँग परिचय भयो, धेरैसँग मित्रता गाँसियो कोही जिन्दगीमा यति धेरै खास बनेर आए जसलाई कहिल्यै आफूबाट गुमाउने परिकल्पनासम्म गर्न सकिने अवस्था बनेन, बन्दैन र बन्ने पनि छैन। अझ भनौँ तिम्रो लागि मेरो मायाको जोश कहिल्यै ओइलाउने छैन। कहिल्यै कमी हुने छैन। विश्वासको सर्त कहिल्यै निभ्ने छैन, निभ्न दिने छैन। तिम्रो जन्मदिनले पनि तिमीलाई जीवनमा अनन्त आनन्द ल्याओस्। शुभकामना।
जब आत्मीय रूपमा एकअर्काको नजिक भयौँ, एकअर्काको भवनाको कदर गर्ने बन्यौँ, एकअर्कालाई नजिकबाट नियाल्यौँ, बुझ्यौँ, भावनात्मक रूपमा कसियौँ त्यो समयदेखि मलाई यस्तो लाग्छ मेरो खुसी तिम्रो साथमा छ। त्यसैले त म तिमीसँग नजिकिएर तिमीलाई कहिल्यै मबाट टाढा जान दिइनँ र दिने पनि छैन।
तिमी मेरो जीवनमा उज्यालो भएर आयौँ, यसमा म धेरै आभारी छु। तिम्रो जन्मदिनमा, तिम्रो लागि मैल दिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपहार भनेको बिना सर्त मेरो माया हो। जुन हरेक पल, हरेक समय मैले तिमीलाई महसुस गराइरहेको छु जस्तो लाग्छ। र, गराउने छु। यसो भन्दै गर्दा जन्मदिनको लागि मात्रै मायाको आभास दिलाउन खोजेको भने पक्कै होइन। यो हृदयमा तिम्रो माया अविरल बगिरहेको छ, बगिरहने छ।
जुन दिन पहिलोपटक तिमीलाई यी नयनले देख्ने मौका मिल्यो, मेरो आत्माले तिमीसँग जोडिएको महसुस गरेको थियो। हुन त माया भनेकै दुई आत्माको मिलन हो। आत्मादेखि आत्मा बीचको कनेक्सन हो। जहाँ माया हुन्छ त्यहाँ समर्पण हुन्छ। सहानुभूति हुन्छ। आत्म बुझ्ने प्रयास हुन्छ।
अब मलाई त्यति थाहा छ तिम्रो सबै सपना साकार पार्नु मेरो जीवनको उद्देश्य बन्छ। परिवारको साथै तिम्रो खुसी नै मेरो जीवनको एकमात्र खोज हो। यसर्थ, तिमी पनि मेरै परिवारको सदस्य हुनेमा कुनै द्विविधा छैन, रहेन।
म भगवानलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु। भगवानले मेरो लागि तिमीलाई कहिल्यै विकल्प दिनुभएन। उहाँले अनिवार्य रूपमा तिमीबाट हामी हुनलाई एकअर्काको परिपूरकको रूपमा आत्म मिलान गराउनुभयो। भगवानप्रति सदासवर्दा दण्डवत छु।
मान्छे जसरी प्रकृतिसँग रमाउछ म त्यसैगरी तिमीसँग रमाउन चाहान्छु। मान्छे जसरी प्रकृतिको मनोरम वातावरणसँग हराउँछन्, म त्यसैगरी तिम्रो सामीप्यतासँग हराउन चाहान्छु। यहाँ हराउनु भनेको गायब हुनु होइन। तिमीप्रति समर्पित हुनु हो। तिम्रो सामीप्यतामा घुलन हुनु हो।
आजसम्म सुनेको मात्र थिएँ प्रेम- एउटा जादु हो, तर तिम्रो आगमनले मैले यी सबै कुराहरू महसुस गर्न पाएको छु। कोही मान्छे साँच्चै नै कसैको जिन्दगीमा सुन्दर परिचय बनेर बस्ने रहेछ, तिमीजस्तै। हरेक पटकको भेटपछि, हरेक पटकको संवादपछि अझ माया बढेको महसुस हुन्छ। अझ भनौँ तिम्रो मायाको लत लागेको छ। बानी परेको छ।
तिम्रो मायाका रंगहरू नै पर्याप्त छन् जिन्दगीमा, मायाकै वेगहरूसँगै मिश्रित यी खुसीहरू छन् जसले जीवित रहन अभिप्रेरित गरिरहेका छन्। मान्छे जन्मिने वित्तिकै मायामा पर्छ। आमाको माया, बाबुको माया, परिवारको माया, समुदायको माया साथीसंगी, इष्टमित्रको आदी सँगको माया। हरेक-हरेकसँग समयअनुसार मायामा परिन्छ। तिमी त्यहीँ माया हौँ मेरो जुन आत्मले रोजेको र व्यवहारले खोजेको भित्र पर्दछौ।
हरेक मायाको अनुभूति र मायाको कुरा शब्दमा मात्र अभिव्यक्त गर्न नसकिने रहेछ। प्रेम लुकिछुपी लाएको मिठो भन्छन्। प्रेम सस्तो बनाउन खुलेआम बजारको वस्तु खरिद-बिक्रीजस्तो देखाउने र सजाएर आर्कषण बनाउन चाहनेमा पर्दिनँ म। किनकि माया फेशन होइन। यो त एउटा अनुभूतिका साथै पारस्परिक खुसी र स्नेहको मनोभाव हो। जुन सौहार्दपूर्ण तरिकाले एकअर्काप्रति नजिकिएको नै निकै राम्रो हुन्छ।
आज जन्मदिनको अवसरमा तिमीलाई मेरो धेरै शुभकामना। तिमीले आँटेको, रोजेको, खोजेको रहेक सकारात्मक कार्यहरू सदैव सफल हुन्। मायाको हकमा हामी अझै प्रगाढ बन्दै जानेछौँ। जसको लागि एकअर्काप्रतिको साथ, सहयोग, विश्वास, हेरचाह, सम्मानको आवश्यकता पर्छ। यसमा हामी कहीँकतै चुक्ने छैनौँ।
तिम्रो जन्मदिनसँगै हर्ष उल्लासका साथ हाम्रो सम्बन्धको शक्तिमा थप उर्जा मिल्ने कामना गर्दछु। हाम्रो माया अनन्तकाल यहीँ उर्जा, यहीँ शक्ति, यहीँ सर्मपणका साथ अगाडि बढ्नेमा पूर्णरूपमा विश्वस्त छु। जन्मदिनको धेरै-धेरै शुभकामना प्रिय।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ३०, २०७८, ०२:२०:३९